» “१२ बजे राती चिहानमा, भूतसँग बियर खाए युवाले, पत्याउनै नसकिने घटना- युवती चिहानबाट उठेपछि.. मध्यरातमा चुडेलसँग बसेको गहिरो प्रेमको भित्री रहस्य (भिडियो सहित)” “१२ बजे राती चिहानमा, भूतसँग बियर खाए युवाले, पत्याउनै नसकिने घटना- युवती चिहानबाट उठेपछि.. मध्यरातमा चुडेलसँग बसेको गहिरो प्रेमको भित्री रहस्य (भिडियो सहित)” – हाम्रो खबर
“१२ बजे राती चिहानमा, भूतसँग बियर खाए युवाले, पत्याउनै नसकिने घटना- युवती चिहानबाट उठेपछि.. मध्यरातमा चुडेलसँग बसेको गहिरो प्रेमको भित्री रहस्य (भिडियो सहित)”
हाम्रो खबर संबाद दाता 1030 Views
“झापा । झापाको दुधेमा रहेको जङलमा मोरङ मिक्लाजुङका १८ बर्षका युवालाइ आ त्माले राती चिहान घारीमा लगेको भन्दै मिडियामा आएका छ्न । मोबाइलमा रिचार्ज किन्न जादा राती ९:३० बजे एक युवतीले बियर खाम भन्दै २/३ ओटा बियर खुवाएको र चिहान घारीमा लगेको भन्दै आफ्ना कुरा राखेका छ्न ।”
“चिहान घारीमा लगेर यतै बसुम भन्दै उनले अनुरोध गरेको र आफू बस्दिन भनेर कोठा फर्किन्दा पछि पछि ती युवती पनि आएको बताएका छन ।उनले बताए अनुसार यो घटना सत्य हो या हैन ? उनले आफ्ना धेरै साथि संग राति झगडा भएछ तर मलाई केहि थाहा भएन भन्दै कुरा राखेका हुन्।”
“धामी,झाक्री , भुत ,प्रेतलाई अन्धबिस्वासको रुपमा लिने गरिन्छ तर कहिले काहीँ नेपालमा यस्ता घटना घटेका समाचार आइरहन्छ्न । यो घटनाको सत्य तथ्य कुरा के हो ? के के भएको थियो त ? जस्ताको त्यस्तै तल भिडियोमा हेर्नुहोला”